तेमाल गाउँपालिकाको दशौं गाँउसभा सम्पन्न - Radio Roshi
तेमाल गाउँपालिकाको दशौं गाँउसभा सम्पन्न
काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले हिजो दशौं गाउँसभा सम्पन्न गरेको छ । गाउँसभाले केही योजनाहरु संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का विकासका योजनाहरु तोकेको समयमै सकाउने उद्घोष पनि गरेको छ । संशोधित योजनाहरु अधिकांश वडास्तरका छन् ।
कार्यक्रमा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सलाम सिं तामाङले तेमालको समृद्धिका लागी सबै जनप्रतिनिधि र जनताको समन्वय साथै सहकार्य आवाश्यक रहेको बताएका छन्। ।उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङले अहिलेसम्म सबैको सहकार्य समन्वयमा पालिका अघि बढेको जानकारी दिएकी छिन् । यो कार्यकालको अन्तिम गाउँसभाको रुपमा दशौं गाउँसभा भएको भन्दै उनले आजसम्म साथ सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद दिएकी छिन् । स्वागत मन्तव्यको क्रममा पालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर लामाले स्वागत मन्तव्य राख्दै समग्रमा तेमालको विकासले राम्रो गति लिएको बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तेमाल गाउँपालिकाले ५१ करोड बराबरको बजेट कार्यन्वयन गर्नुपर्नेछ ।वडाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधि मन्तव्य राख्दै वडा नं. ९ मैनाजाङ मेच्छेका वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर तामाङले अब आफ्ना वडाका योजना कार्यन्वयनले गति लिने बताएका छन् । विगतका दिनहरुले धेरै कुरा सिकाएको र अबका दिनमा स्थानीय तहमा काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सजिलो हुने पनि उनले बताएका छन्।
कार्यक्रममा तेमाल गाँउपालिका अध्यक्ष सलाम ंिसंह तामाङ ,उपाध्यक्ष दुर्गामाँया तामाङ सबै वडाका वडा अध्यक्षहरु ,कार्यपालिकाका सदस्यहरु ,कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको गाँउपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ का अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्
अनुमतिबिना उडाउँदा जफत भएका २० वटा ड्रोन प्राधिकरणले लिलाम गर्ने